Akeneme ngokudayisa kweHlanganani – Maskandi Media
Akeneme ngokudayisa kweHlanganani
Umculi kaMaskandi obuye abambe elikhulu iqhaza eqenjini lesi Cathamiya iHlanganani akanelisekile ngendlela i-album yabo entsha ihamba ngakhona. Ukhulume nabezindaba ngesikhathi bembuza ngezinhlelo zomculo wakhe.
“Ngasohlangothini lweqembu lethu noMntekhala elibizwa ngoShwi noMntekhala, ngeke ngakhala ngalutho ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi siyikhipha kanye ngonyaka kanti”
“ayivamanga ukungahambi kahle emakethe. Namanje nje simatasa silungiselela Impucuzeko Maskandi Festival ezobe iseThekwini ngenyanga ezayo mhlaka 20. Nalapho sobe senza khona esidume ngakho ukujabulisa abantu ngo-live performance”.
“Ngiyabanxusa kakhulu abantu ukuthi bephume ngobuningi babo enhla nasezansi beyozibonela zishukana bukhoma bengezwa ngenzwa bethi. Loya mcimbi usezingeni lomhlaba manje yingakho sithi indebe yomhlaba kuMaskandi”.
“Ngithanda ukunxusa abathandi bomculo ngiphinde ngibakhumbuze ukuthi njengoba sibambisene kuMaskandi noMntekhala, siphinde futhi sibambisane sesihlangene nezinye izinsizwa esiphusha nazo umculo kaCothoza okuyi Hlanganani”.
“Siyazithola izincomo ngale album kulabo asebeyithengile bayasho bathi ngeke uyiphathe iremote ngesandla uma usuyifakile i-CD. KOdwa indlela ehamba ngayo emakethe ithanda ukungasenelisi sizinsizwa yingathi ngithi salute kunina bendlu kaShaka ngithi anginikhumbuze ukuthi ikhona ezitolo zomculo ezweni lonke”. Kubeka ikhehla lenyoni.
Previous Previous post: Sengiqomile by Unjoko
Next Next post: UBobo ufisa ukuyogiya eMabhida